Wax Ka Baro Dhagaxa Kilyaha Gala, Calaamadaha Iyo Daawayntiisa - Daryeel Magazine
Wax Ka Baro Dhagaxa Kilyaha Gala, Calaamadaha Iyo Daawayntiisa
Dhagaxa kilida waa dhagax yaryar oo ku sameesmo kilida gudaheeda marka ay is qabsadaan cusbooyinka ama macdanta ku jirto kaadida.
Noocyada dhagaxyada – Calcium Stones: dhagaxaanta kalshiyam ka waa nooca ogu badan ee sameeya dhagaxa kilida. Waxa ayna samaysmaan marka kaadida ku badato maadada calcium-ka iyo Oxalate-ka ee cuntooyinka qaar laga helo. Kadib waxa midoobo oxalate iyo calcium si ay usameyan dhagaxa kilida.
Calaamadaha ugu badan ee lagu arko dadka xameetiga dhagaxa ugu jira waxaa ka mid ah:
1. Dheefshiid xumo (dyspepsia), Daaco (belching, and flatulence), Matag iyo lalabo (nause and vomitng), Dulqaad l’aan cuntada duxda leh (intolerance to fatty foods).
2. Calaamada ugu badan oo la arko waa xanuun loo yaqaano Biliary colic pain waxuuna caan ku yahay:
a). xanuun daran oo joogta ah hadane badanaa 80% lagu arko dadka xameetida dhagaxaan ugu jiraan.
b). & xanuunkaas waxuu soconayaa mudoo 15 daqiiqo ah ilaa 4-5 saac haduu wax ka badan 5 saac socda waa dhib badnaan.
c). badana xanuunkaas waxaa laga dareemaa meesha dhaxe ee qeybta sare uurkujirta (abdomen) dhinca hoose ee lafta kala qeybisa xabadka oo loo yaqaano sternum.
d). meesha labaad ee laga dareemo waa dhinaca midig ee qeybta sare uurkujirta (abdomen) hoos geeska feeraha, ugu dambeyntii xanuunkaas mararka qaarkood meelo kale duwan laga dareemaa.
– Uric acid stone:
Waxay ka dhalataa marka qofku isticmaalo protein badan sida hilib badan iwm. Hadii uric acid ku badato kaadida waxay fariisan kartaa kilida
– Cystine Stones:
Noocaan waa cudur lakala dhaxlo (genetic disorder) kaaso sababo in cystine in uu ku darmo kaadida kadibna kusameyo kilida qururax (crystals).
– struvite stones:
Noocan haweenka ayu kubadan yahay. Waxay sameysmaan marka uu jiro infekshan ay sababto bacteria oo ku dhaco kaadi mareenka.
Calaamadaha lagu garan karo dhagaxa kilida:
– Kaadida oo xanuunjisa – Dhiig lasocdo kaadida – Xanuun irbad oo kale ah ee kilida iyo dhabarka – Matag (vomiting and nausea) – Dhagaxda yaryar kaadida ayay raaci karaan calaamadna malaha.
See lagu baari karaa dhagaxa kilida:
– Dhaqtarka ayaa kula yeelanayo kulan si u wax oga ogaado calaamadaha u daremayo qofka iyo waalidkiis haday qabaan cudurkaas. – Baaritaan lagu sameeyo kaadida iyo dhiiga si looga baaro maadoyinkaaas aan so sheegnay kaadida haday ku badanyihiin. – Raajo lasaaro kilida nooca X-ray ama CT scan.
Side lagu dawayn karaa dhagaxa kilida
Waxay ku xirantahay size ka iyo meesha uu joogo dhagaxa, mararka qaar dhagaxa hoos ayuu ooga soo dagi karaa kalida wuxuuna xiri karaa tuuboyinka kaadida ee gala kaadi haysta. Waxaa lagu dawayn karaa.
daawada ogu muhiimsan ee lagu dawayn karo hadii dhagaxu uusan aad u wayneen waa BIYAHA NADIIFKA AH. Qofka wa inu maalintii cabaa 2-3 liitar oo biyo ah, si dhagaxda intaysan waweynaan ay uraacaan kaadida. Sidoo kale waxa jiro dawooyin xanuunka yareeya.
Hadii dhagaxu u waynyahay una so dego hoos xirana tuuboyinka kaadida markaas qaliin aya lagu soo saarayaa ayadoo la isticmaalayo “ureteroscope”.
Qaabkee looga hortagi karaa dhagaxa kilida:
– Qaabka ogu wanaagsan waa adigoo maalintii biyo badan oo nadiif ah caba. Biyaha macdanta ku badantahay waa in la karkariyaa si loo dhimo macdantaas. – Ka fogow inad badsato wax kasta oo sameyn kara dhagaxa oo kamid ah kuwo aan kor kuso sheegnay ee sameeya dhagaxaanta. – Iska yaree oo habadsan shaaha, qaxwada iyo shukulaatada. – Kala bad badal cuntooyinka aad cunayso. – Ka yaree cuntada cusbada.
Dhagaxa kilida dawada ugu fican maadaama ay tahay biyaha waa in wax laga badalaa nidaamka biyaha loo cabo khaas ahaan dad ka joogo wadamado qabow. Iyo sido kale dadka joogo wadamada aadka u kulul.
Sababaha Keena Dhagaxaanta Kilyaha, Astaamaha & Siyaabaha Looga Hortagi Karo Wax Ka Baro Xanuunka Qoor-Gooyaha Wax Ka Baro Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan Lowska Baro Calaamadaha Foosha (Signs Of Labour)